Mgbasa ozi ndị na-ere ahịa nke Guerrilla na-emepụta akụkọ
Gaa ozugbo na ọdịnaya
ọkaibe okpuru ahịa & ibu ihe osise site caveman mba
anyi mara ihe, nweko ihe, ma nwekwa ike karie ihe niile agencys na mbu. anyị na ndị ahịa gị nwere njikọ a na-agaghị echefu echefu.
Nkọwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị
ịme ntuli ndụ
Gosi obere ihe
Nabata na Caveman International Agency!
Nnukwu ihe osise na echiche ahịa nke okpuru maka MyToys
Nabata na Caveman Internationa gị n'ụlọngal, anyị na-ele anya a maara nke ọma ahịa dị ka Spotify, Wikipedia na MyToys na mpaghara Guerilla Marketing. Ibu Ọrụ Ndị Ọrụ dị mkpa nye anyị, ọ bụ ya mere anyị ji akwado ndị ahịa anyị Ndị otu dị iche iche maka oruuru mmadụ na enyemaka enyemaka.
Oge ogu nzuzo nke okpuru maka ODLO na Detlef D! na Munich
Isi obodo Bra Bra na-achọ ụlọ ọrụ ndị agha nzuzo nzuzo nke Germany iji nwetaghachi egwu ọhụụ. Igwe ọkụ na-agba egbe na Berlin, atụpụta ọkụ site na ụgbọ ala ndị na-ebugharị na ọtụtụ ịrị elu. Akwụkwọ akụkọ dị iche iche kọrọ banyere mbọ anyị gbara.
Ntụle vidiyo n’oge a na-egosi ihe nkiri telivishọn na-egosi na BritAwards na London maka ndị NGO
Ahịa Green. Caveman International abụrụla ụlọ ọrụ mgbasa ozi izizi na-enye akara ngosi na akara ngosi n'okporo ámá na ndị nka na Germany kemgbe 2006. Moss logos, moss banners, moss sculptures, moss ịrịba ama, ihe niile ga-ekwe omume! Enwere ike ịhazi Moss n'ụzọ zuru oke ma jiri obere nlekọta na ọ ga-adị nnọọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mma gị.
Anyị gara leta onye na-acha odo odo nke nwere onye ama ama ama. Nhọrọ a na-enweghị atụ.
Ihe oru ngo maka Badenova AG August 2019: Mgbanwe ihu igwe na-emetụta anyị niile!
Guerrilla Marketing - bu nka nke ichota ihe kachasi elu na ndi mmadu elebara anya na ntinye ego.
Anyị na ụfụfụ pụrụ iche nke SnowOnDemand, ihe a na-elekwasị anya na mgbasa ozi gị. Snowdị snow na-enweghị agbaze na-agbaze zuru oke maka ịdọrọ uche.
Anyị ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ n'onwe gị na isiokwu nke ịrịa ahịa ahịa & ụdị nke okpuru ọzọ nke mgbasa ozi. Kpọọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahịa ndị ahịa anyị ozugbo!
Onu ahia - Sat 10 ututu - 20 elekere: + 49 2131 4058-629
24H Hotline: + 49 163 71 666 23
Arụ ọrụ ugbu a
AHỤ Marathon dara ụda
pixel Inyeaka Ihe nkiri vidiyo na-agba na Afrika
Mgbe niile currywurst. Na-edepụta akwụkwọ mgbasa ozi mgbe niile. Na-ahụ otu ihe ahụ mgbe niile ...
Anyị na Caveman nwere ọhụụ dị ka ụlọ ọrụ na-ere ahịa nke ndị agha.
Chee echiche banyere wormhole, banyere ụyọkọ kpakpando ọzọ, laghachi na ngwaahịa gị, ma tinye ndụ anyị na ihe ize ndụ mgbe niile.
Biko weghachite akwukwo ndi oru ngo anyi iji nweta nkowa nkenke nke ihe anyi nyere. Biko pịa ebe a
Caveman Guerrilla Marketing bụ otu n'ime ụlọ ọrụ pụrụ iche kachasị mma na ahịa. Anyị na-arụkarị ọrụ
incognito maka nnukwu ụlọ ọrụ netwọk na ebe nke agha na ahịa ahịa, anyị na-aga na-agba ọchịchị mgba okpuru
Ụzọ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahịa ahịa
Jay C. Levinson kere iwu nke ahịa ahịa na afọ 80. Caveman International, kwa, etinyewo onwe ya n'ọrụ ndị a dị mkpa ma si otú a na-enye ọrụ mgbasa ozi na-akpali akpali nke na-achọ mmetụta niile nke onye ahịa gị.
Guerilla Marketing na-eburu n'uche ụbụrụ gị. Usoro njirimara nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịka TKP, CPC kwesịrị ileghara ya anya iji nweta nje virus.
Ahịa ahịa na-enye gị ohere imeri mpi gị. Ọ dịghị onye na-asọmpi ụfọdụ nwere ngwá ọrụ dị iche iche nke ahịa ahịa.
Mkpịsị aka aka na-achọ mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ anyị.
FÜHR nkwa ahịa
Kama ịchọta ogwe mgbasa ozi ahụ, mkpọsa ahụ kwesịrị ịbịaru nke ọma na ndị ọrụ ahụ a na-eche maka mgbasa ozi maka mgbasa ozi mgbasa ozi ga-agafe ọtụtụ ndị enyi na ndị maara dịka o kwere mee.
Guerilla Marketing na-emepụta ohere iji lebara anya na ndị na-ege gị ntị ebe ị nọ. Ma na ọdọ mmiri n'èzí, na egwu ma ọ bụ nhọrọ.
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE
Igwe ahia nke ndị ahịa na-emetụta ndị mmadụ ma na-eme ka ntị maka akara aha gị.
NDỊ CAMPAIGNS HERE
Anyị na-anakọta omume anyị maka gị na mkpọsa dị ike.
Agencieslọ ọrụ niile na ndị ahịa njedebe lebara anya na 24/7 kpọtụrụ Caveman International iji meghachi omume ngwa ngwa na nsogbu ndị dị ugbu a. Ma a Twitter ad maka superbowl; ma ọ bụ ntinye akwụkwọ mgbasa ozi maka ihe omume TV dị mkpa. Agencylọ ọrụ anyị na-elekọta ọnụnọ mgbasa ozi gị ma na-arụ ọrụ mgbe niile na ụlọ ọrụ netwọkụ ndị ama ama n'ụwa niile. Pọtụfoliyo anyị na-enye:
∴ Mmepe nke echiche na mkpọsa nje
∴ Ambient Media Marketing na Europe
∴ Jiri ngwa ntanetị nnukwu ihe ntanetị analogue
∴ Light Marketing & Ìhè Art
Arọ Gbasara Ịzụ ahịa Marketing
∴ Trojan Marketing
∴ 3D eserese na ụlọ & ihe ndị na - akpụ akpụ
∴ Nkwalite & na ebe ndị a na-adịghị ahụkebe
∴ Weather balloon igwefoto ijiji
Rainvertising & Pressure Washer Reverse Graffiti
Advertising Mgbasa mgbasa ozi Laser & laser
∴ Flyvertising na ihe ndị ọzọ na-efe efe maka mmụba ọkọlọtọ n'akụkụ ìgwè mmadụ
:06 ala ihe ntanetị, dijitalụ site na onye egwu maka 3D n'ala ihe
∴ Azụ Street site na ndị ọkachamara na floorball
∴ Chalk Graffiti ma ọ bụ Eto Stencil Stencils
∴ Ihe ntanetị na mgbidi na-adakwasị ebe niile dịka mgbidi ụlọ
∴ Streetbranding gụnyere mmepe site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị
∴ Refere graffiti & n'okporo ámá mbọn
∴ Mgbasa emume maka netwọk mmekọrịta
∴ Sociocritical omume
Site na nkwekọrịta ya na Wall AG na Stroeer Service maka mgbasa ozi n'èzí na akwụkwọ mmado
∴ Mahadum Mahadum na nzukọ otu na ọrụ flyer
∴ Guerilla Marketing maka akụkụ niile nke mmepe mmepe
∴ Mgbasa ozi ahịa nke ala n'okpuru
∴ mkpokọta ụfụfụ na-agbagharị agbagharị na snow maka ihe omume na egwu
Mo Flash mobs & ihe nzuzo ọha na eze
Nkọwapụta 3D ntanetị ọkụ na Saarbrücken
Ogologo akwụkwọ mpịakọta na ụwa
Caveman International bụ nwanyị Full ọrụ n'okpuru-na-na akara ọkachamara gị n'ụlọnganke ahụ mechara bụrụ ụkwụ nke abụọ on mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị specializes. Core amaka bụ echiche na mmejuputa nke Guerilla Marketing na Ahịa ahịa Ebube, Nkwalite, Ihe Omume, Ntinye na Samplings.
ìhè Art na ndabere nke ihe na nrụnye ngwangwa mmekọrịta bụ otu n'ime agụụ mmekọahụ anyị.
Na mpaghara n'ịrịọ Dịka ụlọ ọrụ na-ere ahịa okpuru, anyị na-emebi ala ọhụrụ. Ihe nhoputa ndi ochichi: Ka nhoputa ndi nhoputa di nso, karia ihe dị ịrịba ama bụ ihe ijuanyana nhoputa ndi ochichi onye nhoputa ndi mmadu iji ruo na maka Iji merie ihe mgbaru ọsọ gị, Nkwupụta ihu n'ihu na-egosi na ngwa ngwa dị elu bụ otu oge, maara ihe eche echiche na ihe ijuanya na ịchọrọ agha bụ ebe nkà - na nghọta anyị dị ka Gọọmentị Marketing Special
Ndị na-adịghị ọcha nye echiche dị iche. Ndị dị iche jiri ya ụdị dị iche icheahịa ahụ ga-enye. Ihe na-egosi otu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke ọzọ dị anya site na nke ọzọ. Kedu maka otu looker bụ, na-eme ka onye ọzọ gbaa. Otu na-ekwu ọgba aghara, nke ọzọ dị egwu. Ndị isi mgbasa ozi 40 jide n'aka na anumanu a na-ele anya n'ime mmadu.
Ọ bụghị ngwụrọ na-ekwekọrịta ma na-eche echiche siri ike na tụlere ngwọta Jide n'aka na omume anyị bụ ichetụ n'echiche na nrọ iji gbaa ndị na-ege ntị ume. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịpụ iche, Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ iji jide n'aka na onye ọ bụla hụla ọrụ anyị chọrọ ịkọrọ ya. Anyị na-elekwasị anya n'echiche anyị na nke ahụ ogologo oge o kwere mee Basicsruo mgbe a na-adịghị ahụ anya ma doro anya abịa na ìhè.
Ebe ọ bụ na Ntọala na afọ 2000 ha na-alụ ọgụ ọkachamara na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahịa nke ụwa Caveman nwere oge nke oge a na ọrụ ndị pụrụ iche - maka ndị ahịa a ma ama n'ebe dị anya na Netherlands, Morocco na Germany.
Egwuregwu ahịa ahịa
Mgbasa ozi drones maka Lenor, Procter & Gamblet
Mbido nke ìhè Ọnwa abalị nke Ogwe osisi ahụ
IFA na-agbasa ozi ọma Guerrilla
© 2020	ọkaibe okpuru ahịa & ibu ihe osise site caveman mba
Kwadoro site na WordPress
Elu elu ↑	Hoch ↑